सुर्खेतका तीन बिरामीमा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ ।
प्रकाशित: २०७६-०५-२१ १७:००:०७ नेपाल समय
सुर्खेत- सुर्खेतका तीन बिरामीमा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराउन आएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-४, का ३५ वर्षीय उदय सुनार, बराहताल गाउँपालिका-१, हरिहरपुरकी १२ वर्षीया एलिना पुलामी र वीरेन्द्रनगर-६ का ३५ बर्षीय जयकिसन बिकमा डेंगुको संक्रमण देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग अधिकृत तथा महामारी रोग नियन्त्रण फोकल पर्सन श्यामलाल आचार्यका अनुसार सुनार र पुलामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने बिकको देउती नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग अधिकृत श्यामलाल आचार्य डेंगुको उपचार नपाए ज्यान जाने खतरा रहेको बताउँछन् । ज्वरो आउनु डेंगुको लक्षण भएकाले यो अवस्थामा चेकजाँच गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भाइरल ज्वरो र रुघाखोकीले सिंगै गाउँ थला
जिल्लाको बराहताल गाउँपालिकास्थित चेपाङ गाउँमा भाइरल ज्वरो र रुघाखोकीको संक्रमण देखिएको छ । करिव चार सय घरधुरी रहेको यो गाउँमा दुई हप्तादेखि भाइरल ज्वरोको संक्रमण फैलिएको हो ।
समयमै उपचार नपाउँदा अधिकांश मानिसमा संक्रमण फैलिएको स्थानीयले बताएका छन् । गाउँमा उपचार नपाउँदा थप समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार वराहतालको वडा नं. ५ मा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा सिटामोलसमेत छैन ।
तर, इकाई प्रमुख भुवन पौडेलले भने स्थानीयको यो आरोप स्वीकार्दैनन् । उनी दुई सातादेखि उपचारका लागि आउने बिरामीको भीड लागेको बताउँछन् । ‘उपचारका लागि दैनिक बढिरहेका छन् । अहिले दैनिक १५/१६ जना बिरामी आउने गरेका छन्,’ उनले भने । संक्रमणबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय भने यहाँका बिरामीलाई उपचारको लागि बड्डीचौर र वीरेन्द्रनगर लैजानुपरेकाे बताउँछन् । गाउँमा सडक पहुँच नहुँदा बिरामीलाई स्टेचरमा बोकेर लैजानुपरेकाे उनीहरुकाे दुखेसाे छ ।
गाउँमा मेडिकल सञ्चालन गरेका नारायण खनाल सडक नहुँदा गाउँमा औषधि पुर्याउन मुस्किल भएको बताउँछन् ।
बराहताल गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष तिलक मर्साङलीले तल्लो चेपाङमा भाइरलका विरामी बढेको बताए । उनले उपचारका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत चेतनीधि वाग्ले मौसम परिवर्तनका कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य कार्यालयसँग औषधि र जनशक्ति पर्याप्त छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा यस्ता बिरामी बढी देखिएका छन् । उनले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई भाइरलविरुद्ध सचेतना फैलाउन पत्राचार गरेको समेत बताए ।
के हो भाइरल ज्वरो ?
सिजनल फ्लु भनिने भाइरल ज्वरो मानिसको रगतमा भाइरसको संक्रमण भएपछि आउँछ । शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएपछि पनि भाइरल ज्वरो आउन सक्छ ।
चिकित्सकका अनुसार प्रायः मौसम परिवर्तन हुने समयमा भाइरल ज्वरोको संक्रमण देखिन्छ । यो बेला धुवाँ–धुलोबाट बच्न मास्क प्रयोग गर्न र भीडभाडमा नजान चिकित्सक सुझाउँछन् ।